निर्माता, पैसा को लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य साईट शिकारी लागि डिजाइन संग एक एकाइ रूपमा डिटेक्टर "टेरा-एच" स्थिति छ। कम वजन, किफायती मूल्य, कन्फिगरेसन र उच्च संवेदनशीलता सजिलो यन्त्र साँच्चै लोकप्रिय बनाउन।
धातु "टेरा-N" बिजुली सञ्चालन गर्दैन माटो, धातु वस्तुहरु खोजी गर्न प्रयोग गरिएको छ। उपकरण स्थिरता र उच्च संवेदनशीलता प्रदान, सेन्सर मा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रयोग गर्दछ। डाटा वास्तविक समयमा प्यानल जानकारी operatively संकेत प्रक्रिया र प्रदर्शन अनुमति उच्च microcontroller को उपयोग विश्लेषण छन्। तरल-impermeable केसिङ उपकरणको प्रयोग मार्फत विश्वसनीयता मा कुनै संदेह छैन संग कठिन अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ।
पछि यसको डिजाइन सञ्चालनको सीमित समय संग भागहरु समावेश गर्दैन उपकरण, असीमित स्रोत छ। उपकरणको मुख्य फाइदा प्रयोग को सजिलो र पत्ता लगाउने को गहिराई वृद्धि हुन मानिन्छ। उदाहरणका लागि, एक धातु सिक्का "टेरा-एच" 25 सेन्टीमिटरको गहिराइमा, र कार छ -2मिटर छ आदेश गलत सकारात्मक संख्या कम जमीन, को मिलाइएको समारोह विशेषताहरु अन्तर्गत उपलब्ध .. विशेषताहरु "टेरा-एच" बाट -25 +80 डिग्री को एक तापमान मा यसको प्रयोग अनुमति डिटेक्टर।
1 संवेदनशीलता सेटिङ। यो सेटिङ परिवर्तन गरेर, तपाईं खोज गहिराई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। एक पृष्ठभूमि हल्ला दिने, माटो धातु-युक्त काम गर्दा, यो हस्तक्षेप लोप गर्न संवेदनशीलता कम सिफारिस गरिएको छ। यस अपरिचित भू-भाग संवेदनशीलता हेर्दा न्यूनतम स्तर सेट गर्नुपर्छ, र त्यसपछि, हस्तक्षेप को अभाव मा, बिस्तारै वृद्धि।
सीमा को2चयन। धातु प्रदान संकेत स्तर एक predetermined सीमा नाघ्यो, एक वस्तुको आकार देखाउँछ। सीमा खोज लक्ष्य आधारमा सेट गर्नुपर्छ। सिक्का, चेन, अवशेषहरूको र उच्च संवेदनशीलता आवश्यक अन्य वस्तुहरू: पहिलो स्तर सानो वस्तुहरू फेला पार्न चयन गरिएको छ। पाइपलाइन, क्याश, साथै धातु घटनाहरू को सानो मात्रा को माटो मा उपस्थिति: दोस्रो स्तर मध्यम आकारको वस्तुहरु लागि प्रयोग गरिन्छ। तेस्रो स्तर, स्क्रैप धातु खोजी गर्न साथै मध्यम आकार को वस्तुहरु देखि हस्तक्षेप हटाउन आवश्यक छ।
खोज मोड चयन
1 गतिशील खोज मोड। यो मोड मा, डिटेक्टर सेन्सर वस्तु खोज भन्दा सारियो गर्दा मात्र एक संकेत फेंकना हुनेछ। गति को अभाव मा साधन शून्य संकेत प्रर्दशन गर्दछ। यो मोड छिटो पुनर्प्राप्ति लागि डिजाइन गरिएको छ। यो एक दुई-टोन श्रव्य संकेत गर्दछ: एक उच्च टोन यसलाई गैर-फलाम धातु, कम लगािन्छ गर्दा आवाज - फेला यदि कालो धातु।
2. स्थिर खोज मोड। यो मोड मा, साधन वस्तु सेन्सर द्वारा खर्च समय भर संकेत फेंकना हुनेछ। वस्तु गर्न आउँदै गर्दा ध्वनि मात्रा वृद्धि हुनेछ, र एक दूरी मा - तल बाट। यो मोड वस्तु र यसको स्थान को सही आयाम निर्धारण गर्न प्रयोग भएको छ। विषय उपकरण DF 30-कर्ड ध्वनि मापन यसको विशेषताहरु voiced गर्दा: फलाम धातु पत्राचार एक कम टोन, रङ - उच्च। संकेत बल वस्तुको आकार सीधा समानुपातिक छ।
मामला मा तल 7.5 वी ब्याट्री भोल्टेज ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। उपकरण संग एक कम शुल्क सञ्चालन उपलब्ध हुन, तर यसको संवेदनशीलता एकदम कम छ गर्नेछ।
उपकरण प्रयोगकर्ता सबैभन्दा सहज थियो भनेर आफ्नो हातमा पकड सिफारिस गरिएको छ। तार सेन्सर, arcuate आन्दोलनहरु उत्प्रेरित हुनुपर्छ आधा तार मा अगाडी बढ्दै को एक लहर निम्नानुसार। यो प्रविधी स्क्यानिङ भनिन्छ। को तार स्थिर पत्ता लगाउने गहिराई लागि स्थिर उचाइ राखिएको हुनुपर्छ। को छिटो खोजीमा गतिशील मोड चयन गर्नुपर्छ। कुंडल घाँस वा माटो मा पूरा गर्न अनुमति दिएको छ, गुणस्तर प्रभावित छैन। स्क्यान को 1 m / s एक गति मा प्रदर्शन गर्नुपर्छ। एक धातु वस्तु उपकरणको पत्ता लगाउने मा बीप गर्न, र प्रदर्शन संकल्प मा वस्तु प्रर्दशन गर्दछ।
त्यहाँ वस्तुको स्थितिको सटिक परिभाषा लागि आवश्यक छ भने, यो एक स्थिर खोज कार्य प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसरी तार एकाइ पार प्रविधी उत्प्रेरित छ। सेन्सर पहिलो दायाँ त्रुटि संकेत को सबै भन्दा कम बिन्दु फेला पार्न प्रयास, पछाडि र अघि बायाँ र त्यसपछि देखि उत्प्रेरित छ। एउटै सिद्धान्त खोजी गर्न र गतिशील खोज मोड विषय हुनुपर्छ। यन्त्र ध्वनि फेंकना हुनेछ जब बस सेन्सर तल फेला विषयको। यस खोज्ने प्रक्रिया कम स्क्यानिङ गति सरलीकृत छ।
बिजुली शुल्क उपकरण तलको तथ्याङ्कले मा देखाइएको फारम छ।
देखाइएको रूप मा, डिटेक्टर सर्किट "टेरा-एच" ठीक तत्व बाहेक एक प्रोसेसर र एक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजस्टर comprises। अनुभव इलेक्ट्रनिक्स उत्साही अनुसार, यो पनि सानो छ। किनकी यो खोज को संवेदनशीलता र शुद्धता को उचित विशेषताहरु प्रदान गर्न सक्दैनौं प्रस्तावित निर्माता घटक सूची, एक कम गुणस्तर उपकरण रूपमा यन्त्र characterizes। केही उत्साही फोरम को microcontroller लागि फर्मवेयर प्रदान गर्न आग्रह गर्दै छन्, तर अनुभवी सहयोगिहरु को साधन को डिजाइन बारम्बार छैन यसको व्यावहारिकता रूपमा बरु सन्देहपूर्ण, सल्लाह छन्।
को मेटल डिटेक्टर Fragma «टेरा-N" को समीक्षा विरोधाभासी छन्। सामान्यतया निर्णय उपकरण खरीद गर्दा कारक यसको मूल्य छ। धातु "टेरा-N" बारे 6,000 rubles, जो यो पनि एक सीमित बजेट संग मान्छे को लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ लागत। साधन गुणस्तर कमजोर छ। प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया आधारित नै पैसा को लागि तपाईं एक धेरै राम्रो प्रदर्शन वा प्रयोग लोकप्रिय ब्रान्ड उपकरण संग एक घर उपकरण खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
को मेटल डिटेक्टर को मूल्य को समीक्षा "टेरा-N" सामान्यतया मानिसहरू बर्बाद पैसा पछुताउनु भन्ने तथ्यलाई अन्त्य। केही बेकारी उपकरण, अन्य फेंक सिफारिस - यो सन्टी मा तोड्न र अन्य उपकरण बच्चा दिन बोर्ड द्वारा प्रूडेंस देखाउँछ। को मेटल डिटेक्टर किनेको वास्तविक मान्छे अनुसार, यो आराम मात्र स्क्रैप खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। सिक्का र बहुमूल्य वस्तुहरू फेला, र सामान्यतया fiasco खराब मुड मा समाप्त हुन्छ। Unsuccessfully धन लागि सुरक्षित त्यसपछि समय-परीक्षण उपकरणहरू खरीद र फरक स्तर स्क्यानिङ गुणस्तर बारे चेतावनी दिनुहोस्। उपकरण छैन पनि साईट धातु डिटेक्टरों लागि उपयुक्त किनभने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। ज्ञान मान्छे सल्लाह दिन र एक सभ्य उपकरण किन्न वा प्रयोगमा थिए मिसिन ध्यान केही पैसा बचत अप।
एक योनी कोन के हो? प्रजाति। समीक्षा
आफ्नै हातले गैर-परम्परागत शारीरिक प्रशिक्षण उपकरण के!
पूर्वप्राथमिक उमेर, यसको घटक को बच्चाहरु को शारीरिक प्रशिक्षण
"Lidaza": समीक्षा। "Lidaza": प्रयोग, ग्राहक समीक्षा र डाक्टर लागि निर्देशन
को जूरीको फैसला के छ?
को फेंग शुई गर्न यात्रा। Bagua ग्रिड
घिमिरेको तालिका। भौतिकी मा घनत्व सूत्र। भौतिकीमा घनत्व कस्तो छ?
कलरको कलर "दूध चकलेट" - एक सुन्दर प्राकृतिक छाया